Nhau - Glass Container Market Trends uye Forecast 2020-2025
Girazi Container Musika Mafambiro uye Forecast 2020-2025
Mabhodhoro egirazi nemidziyo zvinonyanya kushandiswa muindasitiri yezvinwiwa zvinodhaka uye isiri-doro kuti irambe iine makemikari inert, isina kuchena uye isingapindiki. Mabhodhoro egirazi uye musika wemidziyo waikosha US $ 60.91 bhiriyoni muna 2019 uye inotarisirwa kusvika US $ 77.25 bhiriyoni muna 2025, ine CAGR ye4.13% pakati pa2020 na2025.
Girazi bhodhoro kurongedza rinodzokororwa kune yakakwira mwero, iyo inoita kuti ive yakakodzera kurongedza zvinhu kubva kune yezvakatipoteredza nzvimbo yekuona. Kudzokororazve matani matanhatu egirazi kunogona kuchengetedza zvakananga matani matanhatu ezviwanikwa uye kuderedza 1 toni yeCO2 emissions.
Chimwe chezvikonzero zvikuru zvinofambisa kukura kwemusika webhodhoro regirazi kuwedzera kwekunwiwa kwedoro munyika zhinji. Doro chimwe chezvinwiwa zvinodhaka zvakarongedzwa mumabhodhoro egirazi. Inouya mumabhodhoro egirazi rakasviba kuchengetedza zviri mukati. Zvinhu izvi zvinopera nyore nyore kana zvikaiswa muchiedza che ultraviolet. Pamusoro pezvo, vatengi veUS vane makore makumi maviri nerimwe uye vakuru vanodya anopfuura 26.5 magaloni edoro uye cider pagore, maererano ne2019 NBWA Indasitiri Affairs.
Pamusoro pezvo, kushandiswa kwePET kunotarisirwa kurova zvakanyanya sezviremera uye masangano anotonga ari kuwedzera kurambidza kushandiswa kwemabhodhoro ePET uye midziyo yekurongedza zvinodhaka uye zvekufambisa. Izvi zvinotyaira kudiwa kwemabhodhoro egirazi uye midziyo panguva yekufanotaura. Muna Nyamavhuvhu 2019, semuenzaniso, nhandare yendege yeSan Francisco yakarambidza kutengeswa kwemabhodhoro emvura epurasitiki anoshandiswa kamwe chete. Iyi mutemo ichashanda kumaresitorendi, macafe uye muchina wekutengesa pedyo nemapurazi. Izvi zvinogonesa vafambi kuti vauye nemabhodhoro avo anozozadzwazve kana kutenga aruminiyamu anozozadzazve kana mabhodhoro egirazi panhandare yendege. Mamiriro ezvinhu aya anotarisirwa kuratidza kudiwa kwemabhodhoro egirazi.
Zvinwiwa zvinodhaka zvinotarisirwa kutora chikamu chakakosha chemusika
Mabhodhoro egirazi ndechimwe chezvinhu zviri nani zvekurongedza zvezvinwiwa zvinodhaka semidzimu. Mabhodhoro egirazi 'kugona kuchengetedza kunhuhwirira uye kuravira kuri kutyaira kudiwa. Vatengesi vakasiyana-siyana pamusika vari kuonawo kukura kuri kudiwa muindasitiri yemidzimu. Piramal Glass, semuenzaniso, iyo vatengi vanosanganisira Diageo, Bacardi naPernod, yakaona kuwedzera kwenguva pfupi kwekuda kwemabhodhoro akasarudzika emweya.
Mabhodhoro egirazi chinhu chakakurumbira chekurongedza zvewaini, kunyanya girazi rakasvibiswa. Chikonzero ndechokuti waini haifaniri kuiswa kune zuva, kana zvisina kudaro, kugamuchirwa kuchaparara. Kuwedzera kushandiswa kwewaini kunotarisirwa kutyaira kudiwa kwegirazi kurongedza panguva yekufanotaura. Semuenzaniso, nyika zhinji dzakagadzira 292.3 miriyoni hectoliters ewaini mugore remari 2018, maererano neOIV.
Vegetarianism ndeimwe yeanokurumidza kukura maitiro muwaini uye inotarisirwa kuratidzwa mukugadzirwa kwewaini, sekureva kweUnited Nations Institute of Wine Excellence, iyo inotungamira kune mamwe mawaini ane hushamwari, anoda akawanda mabhodhoro egirazi.
Nharaunda yeAsia-Pacific inotarisirwa kuve nemugove wakanaka wemusika
Nharaunda yeAsia-Pacific inotarisirwa kuwana kukura kwakakura zvichienzaniswa nedzimwe nyika nekuda kwekuwedzera kuri kuda kwemaindasitiri emishonga nemakemikari. Vanoda kurongedza mumabhodhoro egirazi nekuda kwe inertia yavo. Nyika huru dzakaita seChina, India, Japan neAustralia dzakabatsira zvakanyanya mukukura kwemusika wegirazi wekurongedza bhodhoro mudunhu reAsia-Pacific.
MuChina, makambani ekunze emishonga anotarisana nematambudziko mukuita bhizinesi, kunyanya maererano nekuwana musika uye kutonga kwemitengo, nekuda kwekuchinja kwemitemo ichangobva kuitika munyika. Naizvozvo, kune mikana inogona kukura yevatambi vepamba sezvo vangangosangana nekuwedzera kudiwa kwemabhodhoro egirazi nemidziyo kubva kumakambani aya. Uye zvakare, kunwiwa kwedoro muChina kunotarisirwa kusvika 54.12 bhiriyoni malita ne2021, maererano neBanco do Nordeste.